Sombina vaovaon’ny herinandro momba ny fahasamihafan’ny tontolom-blaogy ary ny fanamby Halley/Levy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2018 20:37 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 13 Martsa 2005)
Miatomboka amin'ny teny nolazain'i Keith Jenkins izay maneho hevitra mikasika ny blaogin'i Rebecca ny tsanganan'i Steven Levy tao amin'ny andiany manaraka amin'ny Newsweek, izay naneho ny ahiahiny hoe matetika tsy dia voasolo tena be loatra ao amin'ny tontolon'ny blaogy noho ny any amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana ireo olona tsy fotsy fiodirana:
”Nila fotoana be ny ‘haino aman-jery nentim-paharazana’ vao tonga tamin'ny teboky ny fampiatiana,’ hoy i Jenkins nanoratra. ‘Ny tahotro dia… ny hamerenan'ny tontolom-blaogy fotsy sy lehilahy Amerikana antsika any amin'ny andro izay mbola nanjakan'ny fotsy tamin'ny adihevitra momba ny olana.”
Nanamarika i Levy fa toa mahatsikaiky fa, ao anatin'ny tontolo natao mba hisokatra, ifotony ary mandray anjara, lehilahy Amerikana fotsy avokoa ny ankamaroan'ireo blaogera voatanisa im-betsaka ao anatin'izany:
Ka noho izany, nahoana no lasa mitambatra ho tokambolo ny ery an-tampony rehefa injay soratan'ny karazan'olona maro ny blaogy an-tapitrisany?
Mitanisa ny Global voices ho toy ny iray amin'ireo tetikasa mikasa ny hanafangaro ny tontolon'ny blaogy i Levy ary miresaka mikasika ny fanamby iray natolotr'i Halley Suitt tao anatin'ilay fivoriana ”Weblaogy, Fanaovana gazety ary Fahazoana fitokisana” natao tsy ela akory izay tany Harvard:
…Nanolotra fanamby ho an'ireo mpampiasa aterineto samy hokaroka blaogera 10 izay tsy lehilahy, fotsy na miteny anglisy – ary ny hifandray amin'izy ireo i Suitt. ”Tsy mihevitra ve ianao,” hoy izy, ‘fa amin'ny blaogy 8 tapitrisa, mety misy feo 50 vaovao mendrika ny ho henoina?” Tena misy tokoa. Ankehitriny, ndeha hojerena raha toa ka afaka handrindra ny tenany mba hitadiavana azy ireo ny tontolon'ny blaogy.
Fanamby sarotra be ny mitady vehivavy weblaogera, indrindra raha toa ka manokatra ny famaritana ny ”weblaogy” ny iray mba hampidirana ireo tranonkala LiveJournal sy Xanga. Manasongadina kaonty ”mavitrika” 2,6 tapitrisa ny LiveJournal - izay ny 1,5 tapitrisa dia navaozina tao anatin'ny 30 andro farany – ary vehivavy avokoa ny 67,2% amin'ireo voarakitra anarana.
Mety ho fanamby sarotra kokoa noho izany ny mitady blaogy tsy fotsy, tsy Amerikana – nanoratra andrana iray nitondra ny lohateny hoe ”Manamboatra Efitra ho an'ny Tontolo Fahatelo ao amin'ny Tanjaka Lehibe Faharoa” aho tamin'ny taona lasa, namoaka sasany tamin'ireo fanamby nahafahan'ireo weblaogera any amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana miditra ao amin'ny aterineto ary mampihaino ny feony. Ankoatra ireo fanamby ireo, miha mora hatrany ny mitady blaogy tsara be manerana izao tontolo izao noho ireo mpanangona nasionaly sy isam-paritra, ary koa noho ireo blaogera sy ”olomalaza mpampifandray” izay mampifandrohy amin'ireo blaogera maro ao anatin'ny vondrom-piarahamonina misy azy.
Ohatra, mamela soritry ny tontolon'ny blaogy Kenyana i Ory Okolloh, naman'ny Global Voices – sangany amin'ireo blaogera kenyana maro no sady fampidirana tsara amin'ireo feo mahafinaritra toa an'i Unganisha sy Mental Acrobatics ny blogroll-ny. Manome toerana tsara, ho an'ireo miteny Anglisy, hanombohana amin'ny fahitana blaogy tsara ao Afovoany Atsinanana ny Egyptian Blog Ring, Jordan Planet sy BahrainBlogs. Ary manasongadina blaogy manerana ny kaontinanta Afrikana ny BlogAfrica, rindrambaiko iray Afrikana mpanangona .
Mirona amin'ny fanekena ilay fanambin'i Halley sy Levy ary hitady blaogy folo vaovao izay tsy soratan'ireo efa ”ahiana mahazatra”? Soraty bilaogy eo amin'ny tranonkalanao izany ary ampahafantaro anay ao amin'ny sehatra fanehoankevitra ato amin'ity lahatsoratra ity.